Infochimps: Iingcali zeQonga leeNkcukacha zaKho eziNkulu | Martech Zone
Infochimps: IiNgcali zePlatifomu yakho yeDatha enkulu
NgoLwesibini, Januwari 29, 2013 NgoMgqibelo, uJanuwari 14, 2017 Douglas Karr
Njengearhente, abathengi bethu basicela ngokungaphezulu nangakumbi ukuba siqonde uninzi lweedatha abazinikezelwayo kwiinjini zabo zokunika ingxelo- CRM, Imeyile, Imidiya yokuncokola, njl. igcina kwiseva yethu yangaphakathi, siyiphulule, emva koko sithumele ulwazi esiludingayo.
Idatha, nangona kunjalo, kuya kusiba nzima ngakumbi ukucoca, ukwahlula kunye nokunikezela. Imidiya yokuncokola, umzekelo, ibonelela ngemitya kunye nee-URL zolwazi ekufuneka zivavanyiwe ukuze zimakwe ngokufanelekileyo, zihlelwe kwaye zixelwe. Kwaye iwindow yexesha esiceliwe ukuba siyihambise ngale datha iya incipha kwaye incinci. Umthamo wedatha uya usiba mkhulu kwaye ukhulu- kwaye kunzima ngakumbi ukuwulawula. Abathengi bethu bafuna iimpendulo… ngoku.
Ngenisa izisombululo zedatha ezinkulu ezinjengee-Infochimps. Infochimps baqala ishishini labo kugxilwe ekulawuleni amawaka edatha enephupha lokuba yi 'wikipedia' yedatha. Nangona kunjalo, ekuhambeni kwexesha, bafumanise ukuba ixabiso kunye nobungcali ababonelele ngokwenyani kukwakha iziseko kunye nenkonzo enokulawula idatha enkulu ngokufanelekileyo.
Nokuba sisiqalo esitsha esiqhumayo ekukhuleni nasekungcwatyelweni kwidatha, okanye inkampani yeshishini efuna uncedo lokuhambisa isisombululo esiza kunceda ukukhupha, ukuhambisa kunye nokubonisa idatha enokwenzeka, ii-Infochimps zinokunceda. Ngaba isibonelelo esongeziweyo kwiqonga njengenkonzo? Sele benedatha yedatha engaphezulu kwe-15,000, kwaye yenye yezimbalwa Gip amaqabane abonelela ngomlilo wedatha yemidiya yoluntu.
Ukuthunyelwa okuqhelekileyo kunye ne-Infochimps kukudityaniswa kweenkonzo zangaphakathi endlwini zokwakha iziseko zokudibanisa kunye nokufikelela komsebenzisi kunye nokuphuhlisa izixhobo. Infochimps yahlukile phakathi kweqonga ledatha enkulu ngenxa yokuguquguquka kwabo kubungakanani bokuhanjiswa.
Ingcaciso ngeQonga leQonga:
Uluhlu Lweziseko -Oomatshini abaphantsi kwamandla okuqokelela idatha kunye nokudityaniswa, ixesha lokwenyani kubahlalutyi, ibhetshi enkulu kubahlalutyi, kunye nokugcinwa kwedatha.
Ukuhanjiswa kweDatha ™ -I-DDS idityaniswa ngaphandle komthungo nendawo yakho esele ikho, ibonelela ngobuchule be-ETL (ukukhupha-ukuguqula umthwalo), kunye nokwenza ukuba lixesha elifanelekileyo, ukusasaza uhlalutyo lwedatha.
Ulawulo lweenkcukacha Nokuba yi-HBase, iCassandra, i-Elasticsearch, i-MongoDB, i-MySQL, okanye abanye, siyaqinisekisa ukuba ukugcinwa kwedatha efanelekileyo yomsebenzi kuhlala kulungile kwizandla zakho.
Ilifu Hadoop -Yenza uhlalutyo olukhulu lwe-batch njengoko uyifunayo, nokuba zingamaqela e-ad-hoc Hadoop okanye uhlala usebenza kwimveliso. Fikelela kuzo zonke izixhobo ozifunayo, kwimfuno yokulinganisa kunye nokulungisa.
Uludwe lwe sicelo Ujongano lokwenza ukuba idatha eNkulu ifikeleleke ngakumbi, kubandakanya nolungelelwaniso kubahlalutyi isixhobo sokubhala, idashboard yomzobo, kunye ne-API enamandla.
Wukong -Bonelela ngokulula kubahlalutyi amava okubhala. Bhala eyakho kubahlalutyi kuRuby onobunjineli, sebenzisa ikhowudi ekuhlaleni kwimijikelezo yophuhliso olukhawulezayo, kunye nokufumana amandla okukhoyo kubahlalutyi izikripthi.
KwiDashpot ™ -Yila ukubonwa kwexesha lokwenyani ukusuka kwidatha yokusasaza, ufumane ukubonakala okunzulu kwiinkqubo zakho zeQonga, kwaye uqalise ngokukhawuleza kwaye uyeke iiyunithi ezisebenzayo kumaqela akho edatha.
iqonga API -I-API emanyeneyo, ulawulo lweqonga kunye nokubonakala kwedatha ngaphakathi kuyo zizicelo ezimbalwa zewebhu ezikude. Okwangoku kwi-beta.
Umzekelo: Inkampani enkulu yemidiya yakhe iqonga lokumamela imithombo yeendaba eqokelela i-18 okanye imijelo yedatha yemidiya yoluntu. Umjelo wongezwa ngolwazi lwesini, uhlanganisiwe kulwazi lwesishwankathelo, ukhutshelwe ngaphandle kwiikhawuntari, usetyenzisile uvakalelo, kwaye wenza izaziso apho uceliwe. Injongo yale nkqubo kukubonelela abathengi ngeendaba zexesha lokwenyani. Abanye abathengi baquka ServerAdmin, Mnyama, Runa, Imithombo yeendaba yaseWhaleshark, yaye IBlue Cava.
Cwangcisa idemo ngeeNkcukacha okanye i-imeyile info@infochimps.com ngolwazi olungakumbi.
tags: Apiidatha enkuluilifu hadoopidashpotinkonzo yokuhanjiswa kwedathaLawulo lwe datahadoopinfochimpswukong
Ukuba andizukukroba, i-infochimp luhlobo lwenkonzo olunokuthi umamele izinto ezifunwa ngabantu kwi-medai yentlalo kwaye emva koko abathengi banokucwangcisa into ngokufanelekileyo? Ndingaba nomdla nakwiwebhusayithi yam.
Lowo ngomnye wemithombo yedatha abanokubonelela ngayo kwaye unokwakha inkonzo yokubeka iliso apho. Nangona kunjalo, ayisiyiyo ishishini labo eliphambili elo.